सबैले हेर्नै पर्ने एक सहासी नर्सको का,रुणीक कथा ! जो दिन रात मृ,त्यु संग ल,ड्दै बा,चेकी छिन (भिडियो) – List Khabar
Home / समाचार / सबैले हेर्नै पर्ने एक सहासी नर्सको का,रुणीक कथा ! जो दिन रात मृ,त्यु संग ल,ड्दै बा,चेकी छिन (भिडियो)
सबैले हेर्नै पर्ने एक सहासी नर्सको का,रुणीक कथा ! जो दिन रात मृ,त्यु संग ल,ड्दै बा,चेकी छिन (भिडियो)
admin May 25, 2021 समाचार Leaveacomment 83 Views
अत्यन्तै सुन्दरी नर्स करुणा दाहाल यतिबेला बि`रामीको घर-घरमा गएर होम केयर गरिरहेकी छिन्। उनले केयर गर्दै आएका पाँच जना बि’रामीमध्ये दुईजनाको ज्या’न गइसकेको छ। भने अरु बिरामीहरूलाई निको पार्न पनि सफल भैरहेकी पनि छिन्। आफूले केयर गरेको बि’रामीको सम्झ्ना गर्दै उनी भन्छिन्,बेलुका गुड बाइ सिस्टर,केही चाहियो भने भन्नू दिदीलाई भनेर सुतेको मान्छे बिहान एक्स्पाएर भएको हुँदा आफूलाई मन बुझाउनै गा’ह्रो भएको छ।
उनी भन्छिन्,”उहाँ ४९ वर्षको हुनुहुन्थ्यो बिहान म बिहान हुँदा सामान्य नै हुनुहुन्थ्यो,बोलि रहनुभएको थियो तर त्यसको आधाघण्टा पछी ब्रेकफास्ट लिएर जाँदा उहाँ एक्स्पाएर भैसक्नुभएको थियो। उहाँलाई केही पनि भएको जस्तो लाग्दैन थियो। यदि स्वास लिन गाह्रो भएको भए,स्याचुरेशनक अवस्था कम भएको भए पनि त चि’त्त बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो। केही नै नभइ उहाँ जानुभयो।” त्यसैगरी अर्को बिरामी ४१ वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि साइकेट्रीक बिरामी हुनुहुन्थ्यो र मेडिकेशन पनि गर्दै आइरहनुभएको थियो।
उहाँको सम,स्या चाहिँ घरीघरी द’म बढ्ने गर्दथ्यो। उहाँको स्याचुरेशन पनि ठीकै थियो। एकपटक मात्रै घटे’को थियो त्यसपछि उहाँको पनि एक्कासि एक्स्पाएर भयो। बाँकी तपाईंले केय,र गर्दै आइरहनुभएको बिरा’औमीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्दा उनी भन्छिन् बाँकीको अवस्था पनि सामान्य नै छ तर भन्न सकिन्न। किनभने यस्तै सामान्य भएका बिरा,मीहरू समेत गामीले गुमा`एका छौँ। एकछिन पछि हामी नै के हुन्छौं भन्न सकिन्न।
औषधि त खासै केही छैन,ज्वरो आएमा सिटामोल खाने हो।हामीले बाफ लिने हो बिहानबेलुका त्यहाँभन्दा केही नै अरु उपाय छैन। जतिसक्नुहुन्छ मास्क लगाउनु होस्,स्यानिटाइजर लगाउनुहोस्,सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। औषधि त खासै केही छैन,ज्वरो आएमा सिटामोल खाने हो।हामीले बाफ लिने हो बिहानबेलुका त्यहाँभन्दा केही नै अरु उपाय छैन।
जतिसक्नुहुन्छ मास्क लगाउनु होस्,स्यानिटाइजर लगाउनुहोस्,सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्।
Previous पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, जेष्ठ ११ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next यस्ता सामान्य लक्षण देखिना साथ को- रोना परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह, नत्र पछुताउनु पर्नसक्छ !